IMAP - Wikipedia
Ny Aterineto ny Fidirana amin'ny Hafatra Protocol na IMAP dia an-Tserasera protocol, izay fitaovana fijinjana ny sasany ny mety natolotry ny protocol POP3 (paositra Protocol) sy ny electronic mail alalan'ny ny World wide Web (webmail), satria izany mamela ny tsy an-katerena ny fitehirizana ny hafatra mikasika ny mpampiasa ny solosaina. Mandritra izany fotoana izany foana, ary ny dika mitovy ny taratasy eo amin'ny lohamilina (serveur). Afaka mampiasa ny kaonty mailaka dia nentina avy amin'ny alalan'ny fanoloran-tena mail fandaharana (client program toy ny.x. ny Mozilla Thunderbird). Matetika ny fandaharana fa POP3 fanohanana ihany koa ny fanohanana IMAP. Amin'ny solosaina sy ny mpampiasa raha miorina ary misy e-mail fandaharana, ary raha mampiasa ny fahafahana miditra ny kaonty, IMAP "mahita" izany rehetra mitovy rafitra.
1 Protocols e-mail
IMAP dia protocol for application-ny sosona ( OSI momba ny Modely) izay mamela rindrambaiko mpanjifa (client) ny fidirana amin'ny kaonty mailaka ταχυδρομειόυ lavitra lohamilina (serveur). Ny dikan-IMAP izay ampiasaina amin'izao fotoana izao dia dikan-4, ny fanitsiana 1 (IMAP4rev1), voafaritry ny RFC 3501. Ny mpizara IMAP, amin'ny fampiharana, handray ny fifandraisana avy any amin'ny seranan - 143. IMAP, rehefa ampiasaina amin'ny Fiarovana ny Faladiany Sosona, dia fantatra ho toy IMAPS, ary handray ny fifandraisana amin'ny seranan-tsambo 993.
Ny IMAP miasa sy amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto. Mpanjifa mampiasa IMAP matetika hamela hafatra misy sy ny mpizara, raha tsy ny mpampiasa misafidy mba hamafa azy. Izany no iray amin'ireo toetra ny asa IMAP, izay mamela ny mihoatra ny iray ny mpampiasa ny fitantanana ny kaonty mailaka toy izany koa. Indrindra e-mail rindrambaiko (mpanjifa) fanohanana IMAP (ankoatra ny POP), nefa izany dia tsy ny e-mail lohamilina izay manohana IMAP. Hadisoan-tsiahy: La balise ouvrante <ref> est mal formée ou a un mauvais nom. Ny protocol IMAP dia manome fahafahana hahazo ny e-mail ny kaonty. Ny rindrambaiko mpanjifa dia mety store eo an-toerana dika mitovy ny hafatra, fa izy ireto no heverina ho vonjimaika voatahiry fahatsiarovana ny mailaka (izay voatahiry amin'ny mpizara).
IMAP dia natao Hanamarihana Crispin tamin'ny 1986 toy ny protocol for lavitra mahazo ny e-mailaka inbox, mifanohitra amin'ny fanta-daza POP, izay dia natao mba mandray mail .Hadisoan-tsiahy: La balise ouvrante <ref> est mal formée ou a un mauvais nom.
IMAP teo aloha fantatra amin'ny anarana hoe Aterineto Mail Fidirana Protocol, Ifandrimbonana Mail Fidirana Protocol (RFC 1064), ary koa ny maha - Vonjimaika Mail Fahazoana Fifanarahana.Hadisoan-tsiahy: La balise ouvrante <ref> est mal formée ou a un mauvais nom.
Tsotra Mail Transfer Protocol (SMTP)
RFC 3501 fepetra arahana ho an'ny IMAP 4.1
Ny protocols POP3 sy IMAP avy amin'ny Sampan-draharaha ny milina Injeniera ny teknolojia pampianarana momba ny Crete.Endrika:Παραπομπές
Ny IMAP Fifandraisana Archived Desambra 12, 2004 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=IMAP&oldid=1038047"
Dernière modification le 25 Septambra 2021, à 16:57
Voaova farany tamin'ny 25 Septambra 2021 amin'ny 16:57 ity pejy ity.